मत मतगणना अपडेट : देउवाको अग्रता कायमै, हालसम्म कसको कति मत आयो ? - ramechhapkhabar.com
मत मतगणना अपडेट : देउवाको अग्रता कायमै, हालसम्म कसको कति मत आयो ?
नेपाली कांग्रेसको नयाँ सभापतिका लागि भएको चुनावमा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले अग्रता कायम राखेका छन् । तर पहिलो चरणमै सभापतिमा निर्वाचित हुनका लागि चाहिने ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत देउवाले पाउने सम्भावना भने कम देखिएको छ ।
३७ सय ७९ मत गन्दा देउवाको पक्षमा १७ सय ९८ तथा शेखर कोइरालाको पक्षमा १४ सय १३ मत परेको छ । यस्तै प्रकाशमान सिंहले २८६, विमलेन्द्र निधिले २०० तथा कल्याण्ड गुरुङले १६ मत पाएका छन् । ९ नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको चुनावमा पहिलो चरणमा सभापतिमा कुनै पनि उम्मेदवारले जितका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत आवश्यक पर्छ ।
५० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नका लागि देउवाले गन्न बाँकी मतमा ६० प्रतिशत प्राप्त गर्नु पर्छ । ४ हजार ७ सय ४३ मतदातामध्ये ४ हजार ६ सय ७९ मत खसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
चितवनमा अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भारतीयहरूको गिरोह सक्रिय भएको भेटिएको छ । उनीहरूले यहाँका नागरिकलाई नेटवर्किङमा फसाएर ठग्ने गरेको पाइएको हो ।